Mara PLA ihe nke 3D biri ebi ihe - China Cixi Lanbo Obibi
3D Ọnwa oriọna
Uzo spool nke PLA
Mara PLA ihe nke 3D biri ebi ihe
Ọtụtụ ahịa na ndị enyi na-ajụ m ma ọ bụrụ na PLA bụ plastic? Ebe a bụ a ike ike ikwu banyere ihe bụ PLA taa.
PLA bụ English afo nke polylactic acid, nke e dere dị ka: polylacticacid. Polylactic acid (PLA) bụ a akwụkwọ biobased na ere ure ihe mere si starch ngwaọrụ chọrọ site mmeghari osisi ego dị ka ọka. The starch akụrụngwa na-enwetara site saccharification nweta glucose, na mgbe ahụ na glucose na a ụfọdụ nje na-fermented na-emepụta elu-adị ọcha lactic acid, na mgbe ahụ a na-molekụla ibu polylactic acid na-synthesized site chemical njikọ. Ọ nwere ezi biodegradability. Mgbe ojiji, ọ ga-kpam kpam rere site microorganisms na ọdịdị n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ, na n'ikpeazụ na-arụpụta carbon dioxide na mmiri, nke na-adịghị emetọ gburugburu ebe obibi. Nke a bụ nnọọ uru na gburugburu ebe obibi na a ghọtara dị ka ihe environmentally friendly ihe onwunwe.
Akụkọ kwubiri na-arụpụta nke-edu ndú, mercury, cadmium, chromium, biphenyl, na diphenyl ether ndị agbanwe agbanwe na afọ 11 EU ntụziaka na ojiji nke nanị bekee, na-arụpụta nke sample 001 e achọpụtara. Nd na-bụghị dected.
All n'elu nnyocha na-egosi na PLA bụ a ezi ihe onwunwe, ma nri nchekwa bụ n'ezie a okwu nke oké nchegbu ka onye ọ bụla, ma ọ bụ kpachara anya.
Ka m na-ekwu banyere ụfọdụ ezughị okè na-ezo ihe ize ndụ nke PLA. Mbụ, PLA bụghị eguzogide elu okpomọkụ, na ya ihu ọma amalite deform gburugburu 60 Celsius. Dị ka a nri ebu, ọ ga-abụ oyi emeso; PLA ihe nwere ike rere, nke bụ uru na a mwepu. Ọ bụ ezie na ọ bụ environmentally friendly, ọ na-achọ 3D-ebi akwụkwọ nke ngwaahịa-ọkwa ihe. Inogide bụ obere osisi; na-ebi akwụkwọ usoro, n'ihi na ọ bụ elu-okpomọkụ agbaze, ọ ga-echebe ndị ahụ, ọ bụ ezie na ahụ onwe ha bụ ndị na-abụghị ndị na-egbu egbu, ma nke a bụ a bit dị ka PM2.5, ogologo oge na-eku ume ma ọ bụ ụfọdụ mmebi nke mmadụ na akpa ume, Ya mere, na 3D-ebi akwụkwọ ohere na-ọkacha mma ventilated.
Ya mere, PLA bụ environmentally friendly ihe onwunwe na onye ọ bụla nwere ike iji jiri obi ike na.
Umengwụ dumpling artifact
N'ikpeazụ-eti mkpu slogans, technology agbanwe ndụ, 3D ebi akwụkwọ si na nrọ na eziokwu!
Post oge: Aug-16-2018